Hipmụ amaala Saint Lucia - Ngogoro Real Estate - alụbeghị di
Hipmụ amaala St Lucia - Onyinye Ala Reallọ - Single
Nwa amaala Saint Lucia - Ihe Ngogo ala Real Estate - Ndi n’achoghi akwukwo
Hipmụ amaala Saint Lucia - Reallọ Ahịa Reallọ
Ndị minista na-ahụ maka ụlọ ọrụ ga-atụle ọrụ ụlọ ala ga-agbakwunye na ndepụta ndị akwadoro maka ụmụ amaala site na Mmemme Etiti. Ezi ụlọ na-akwado ụlọ ga-adaba n'ụzọ abụọ sara mbara:
Hotelslọ oriri na ọ resoụ .ụ mara ụlọ dị elu mara mma
Ngwongwo elu-njedebe dị elu
Ozugbo anabatara, ezigbo ụlọ maka ụlọ na-enweta ego maka itinye ego n'ọrụ ntozu maka ndị na-achọ akwụkwọ maka nwa amaala site na ntinye ego.
Achoro onye anamachọ ya ka o mezue izu ahia na nkwekorita nke ire ya maka itinye aka na ulo ahia. Etinye ego ndi ozo, tinye ya na onu ahia ekwenyero, ka edobere ya na akaụntụ esiri ike ikwesiri, ma onye ndozi ya na ndi otu ndi ulo oru mbo na Saint Lucia.
Ozugbo emere ngwa maka ihe ụmụ amaala site na itinye ego na ezigbo ụlọ, ụlọ ọrụ na-eso nke a chọrọ:
Onye anamachọihe bụ: US $ 300,000